Paper Packaging - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Paper Packaging)
Akpa onyinye ahia onyinye di egwu
Akpa onyinye ahia onyinye di egwu Akpa akwụkwọ onyinye, ya na ezigbo ọfụma na njiri mara mma you nwere akara ụlọ ọrụ. Akpa ozi ngwugwu, ngwugwu nke aka gi, nwere ihe puru iche. Akpa mpempe akwụkwọ ahaziri iche, ya na ihe osise pụrụ iche na akara ngosi gị, juputara n'ụdị ụlọ ọrụ gị. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ...
Black Matte omenala akwụkwọ onyinye akpa
Black Matte omenala akwụkwọ onyinye akpa Akpa onyinye onyinye, ezi ihe eji ezi onyinye nke eji ebi ndu eji ebi ndu di nma. Akpa mpempe akwụkwọ, ịkwakọ ngwaahịa gị na aka, dị mfe iburu. Edere akpa mpempe akwụkwọ, jiri akara mbipụta pụrụ iche ya. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma chọta Li yang...
Nkwakọ ngwaahịa akpa nri Fancy mere ochie
Nkwakọ ngwaahịa akpa nri Fancy mere ochie Akpa mpempe akwụkwọ e biri ebi, akpa mpempe akwụkwọ omenala, ya na ntinye matte, mara mma. Akpa mpempe akwụkwọ, akpa onyinye igbe maka ngwaahịa, ọfụma na njiri mara. Akpa akwụkwọ maka ngwaahịa, akpa akpa ngwaahịa na aka, ọ dị mfe iburu ma dịgide. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke...
Akpa eji mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na aka
Akpa eji mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na aka Akpa mpempe akwụkwọ na-acha ọcha, na-acha ọcha na akpa akwụkwọ nwere aka na omenala e biri ebi, klas dị elu. Akpa ngwugwu mpempe akwụkwọ, akpa ngwakọ maka ngwaahịa nwere akara e biri ebi, juputara na atụmatụ ụlọ ọrụ. Bagzụ ahịa akpa mpempe akwụkwọ, ezigbo mma maka...
Akwukwo ngwongwo ekeresimesi nwere akara ngosi
Akwukwo ngwongwo ekeresimesi nwere akara ngosi Mpempe akwụkwọ na-ebu akwụkwọ, akpa akwụkwọ nwere akwa ndochi, mara mma na ịchọ mma. Akpa mpempe akwụkwọ, akpa mpempe akwụkwọ maka ịkwakọ ngwaahịa, akwa na juputara na ụlọ ọrụ gị. Akpa mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, akpa mpempe akwụkwọ e biri ebi nke nwere...
Black omenala akwụkwọ ahịa akpa na-eji
Black omenala akwụkwọ ahịa akpa na-eji Mpempe akwụkwọ akara azụmaahịa, akpa ahia nwere akara, mara na ejiji. Mpempe akwụkwọ ojii na-eji oji, akpa mpempe akwụkwọ nwere akara ngosi na ebe a na-emechi UV, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Akpa ozi akpa onyinye, akpa onyinye kaadi, akpa akwalite ya na akpukpo ahiri....
Akpụkpọ akpa oji na-eji oji ojii
Akpụkpọ akpa oji na-eji oji ojii Akpa akwụkwọ ozi Matte, akpa mpempe akwụkwọ matte na akara ngosi e biri ebi. Akpa ịzụ ahịa akwụkwọ nwere akara, akpa onyinye akwụkwọ, akpa ozi mpempe akwụkwọ, ọmarịcha ma maa mma. Akwukwo onyinye onyinye, akpa onyinye onyinye, otinyere ya na ihe omuma ya juputara na njiri mara gi....
Nkwakọ ngwaahịa akpa zuru oke dị ọnụ ala
Nkwakọ ngwaahịa akpa zuru oke dị ọnụ ala Akpa mpempe akwụkwọ, akpa mpempe akwụkwọ maka ịkwakọ ngwaahịa, akwa dị elu na imewe pụrụ iche. Akpa mpempe akwụkwọ maka onyinye, akpa onyinye igbe, akara mbipụta omenala iji. Akpa Nkwakọ Akwụkwọ, ezigbo ọkwa maka nkwakọ ngwaahịa, akpa onyinye akwụkwọ, nnabata matte. Chọrọ...
Akpa mpempe akwụkwọ ọcha na akara ejiri ebipụta akara
Akpa mpempe akwụkwọ ọcha na akara ejiri ebipụta akara Akpa nkwakọ ngwaahịa acha ọcha, akpa onyinye akwụkwọ, akpa ahia nwere akara e biri ebi. Akpa onyinye onyinye nwere akara, akpa na-acha ọcha nke nwere akara oji, odi nfe ma odighi agba. Akpa mpempe akwụkwọ Logo, eji ejiji dị iche iche mere ma mepụta ya, ezigbo nhọrọ...
Akwukwo onyinye ndi ahia ahia ndi n’ezie
Akwukwo onyinye ndi ahia ahia ndi n’ezie Igbe mpempe akwụkwọ mgbanaka, igbe kaadiboodu siri ike, nke akwụkwọ ederede ji Igbe dị mma ịkpụ akwa nke ọma , emere na mkpuchi na igbe igbe, na velvet n'ime mpe mpe akwa maka mgbanaka / ntị dị mma. Nabata na omenala ka ị tinye igbe mgbanaka na ibipụta akara ụlọ ọrụ gị...
Akwukwo Onyinye Ejiri Oji nke Akwukwo Onyinye